I-countertop slab breccia rose calacatta viola imabula esikwe ngosayizi
I-countertop slab breccia rose calacatta viola imabula esikwe ngosayizi
Imabula ye-Calacatta viola iyimabula enhle emhlophe enemithambo ensomi emnyama.Yaziwa kakhulu ngezici zayo ezifiselekayo kanye ne-veining.
I-countertop slab breccia rose calacatta viola imabula esikwe ukuzeusayizi
umkhakha wezindlu zikanokusho we-flooring, imbobo yodonga, ifenisha, njll.
Imabula ye-Calacatta viola iyimabula enhle emhlophe enemithambo ensomi emnyama.Yaziwa kakhulu ngezici zayo ezifiselekayo kanye ne-veining.Imabula ye-Viola calacatta iyisinqumo esihle kakhulu sokwengeza ukunotha nokunethezeka ezindlini zangasese, emakhishini nakunoma iyiphi indawo yokuhlala.
I-Breccia vagli marble slab ngelinye igama le-Calacatta viola marble slab.Imabula yendabuko yase-Italy efana namashidi eqhwa antanta olwandle olubomvu klebhu.Itshe elihle elizogqama kunoma yisiphi isimo.Imabula ye-Calacatta Viola ihlukaniswa ngokugqama kwayo kokunsomi nokubomvu ngokumhlophe qwa.Leli tshe lase-Italy elaziwayo lengeza ukunethezeka kunoma iyiphi indawo.
Imabula ye-Calacatta viola iyimabula kanokusho ye-calacatta ekhanyayo futhi enhle, enemithambo emihle e-burgundy.Ingase isetshenziselwe ukwenza isitatimende esinesibindi ezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza ezifana nezingubo zodonga, i-flooring yangaphakathi nengaphandle, indawo yokugezela kanye nekhawunta, kanye nokukhiqizwa kwezinto zokuhlobisa ezihlukile, phakathi kwezinye eziningi.
Itshe Lemvelo lingaphansi kokuhlukahluka njengoba ithayela ngalinye linendawo yalo ehlukile.Sicela ubuze mayelana nokutholakala kwezidingo zakho zephrojekthi ethile.
Ikakhulukazi imikhiqizo: imabula yemvelo, igwadle, i-onyx, i-agate, i-quartzite, i-travertine, i-slate, itshe lokwenziwa, nezinye izinto zamatshe emvelo.
Okwedlule: I-Italian wood grain classico bianco white palissandro marble yodonga
Olandelayo: Intengo enhle ye-Vietnam crystal marble yokuhlobisa ikhaya
Intengo eshibhile Imabula ye-Chinese Guangxi emhlophe ye-wa...
I-Italy i-dolomite calacatta da vinci yemabula emhlophe ...
Amatshe emvelo ama-slabs umdwebo we-landscape yemabula f...
I-Italy light beige serpeggiante yemabula eyenziwe ngokhuni...
I-Granite Emnyama, I-Blue Granite Countertops, Amathayela Odonga Lwemabula Emhlophe, I-Granite Empunga, IGranite Empunga Ekhanyayo, I-Granite Ephuzi,